LibreOffice 4.0 dia hanatsara ny endrika ivelany sy ny asany | Avy amin'ny Linux
Ny suite birao ankafizin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaim-poana dia efa hamoaka ny kinova 4.0, izay mampiditra fanovana mahaliana, ao anatin'izany ny mety mampiasa lohahevitra Firefox Persona, ny fiasa zanatany hifehy ny fampisehoana avy amin'ny telefaona Android sy ny fanatsarana ary ny fanohanana amin'ny endrika isan-karazany.
Omeko anao ny famintinana ireo fiasa vaovao, ao amin'ny ny naoty famoahana(mbola eo an-dàlana) avy amin'ny wiki Document Foundation dia ho hitanao ny lisitra feno sy ny fanazavana fanampiny.
Miampy ny fiasa Mampiaiky ny fanaraha-maso lavitra ho an'ny telefaona Android. Amin'izany dia ho mora kokoa ny mampiasa finday Android hifehy ny fampisehoana.
Niampy ny safidy Compress Graphic ho an'ny Impress, Calc, and Draw, mbola tsy tonga any amin'ny Mpanoratra. Ity fampiasa ity dia ahafahanao manova ny sary, ahafahanao manova ny habeny (amin'ny pixel sy DPI), ny vahaolana, ny kalitaon'ny sary (0 ka hatramin'ny 100) ao amin'ny JPEG, na ny haavon'ny famatrarana (1 ka hatramin'ny 9) amin'ny PNG.
Nanatsara ny kalitaon'ny sary nafarana tao anaty antontan-taratasy
Fampidirina tsara kokoa amin'ny menio Unity manerantany ary miaraka amin'ny HUD.
Ny fifampiresahana amin'ny fisafidianana fomba dia ahafahanao mijery a style preview
Fanohanana an'i Firefox Personas
Noho izany dia tsy maintsy mankany isika Fitaovana -> Safidy -> Personalization -> Safidio ny olona . Haseho ny fifampiresahana hahafahantsika mampiditra ny URL amin'ilay lohahevitra tiana hampiasaina.
Fanohanana fanampiny momba ny fisie Microsoft Visio, izao dia manohana ny kinova Visio rehetra manomboka amin'ny Visio 1.0 1992 ka hatramin'ny Visio 2013.
Optimised amin'ny topy maso sy filalaovana rakitra multimedia avy amin'ny Linux amin'ny fampisehoana manaitra. Tonga ihany koa ny fanohanana an'i Gstreamer 1.0.
Ny kalitaon'ny fisehoan'ny sary sy ny fanondranana azy amin'ny PDF dia nohatsaraina.
Fanatsarana ny kaody loharano sy ny fanafoanana ny fanohanana amin'ny fanondranana ireo endrika efa lany andro, toa ny antontan-taratasy Office 95 sy StartOffice 1 ka hatramin'ny 5.
Ny boky adiresy Thunderbird dia azo alaina avy amin'ny Base avy amin'ny ditros toa an'i Debian, Ubuntu ary ireo teratany avy aminy.
Fianakaviana vaovao misy endri-tsoratra maimaimpoana 4 no tafiditra ao: Sokafy Sans (Miakatra), PT Serif (ParaType), Source Code Pro ary Source Sans Pro (Adobe)
Azo atao izao ny mampiasa fomba lohateny lohateny sy tongotra hafa amin'ny pejy voalohany amin'ny Mpanoratra nefa tsy mila mampiasa fomba pejy hafa, raha mila fanazavana fanampiny Ity lahatsoratra ity.
Fanohanana amin'ny fanafarana sy fanondranana ny fitenenana matematika RTF teratany avy amin'ny mpanoratra.
Fanohanana amin'ny fanafarana an-tsioka fanamarihana avy amin'ny antontan-taratasy RTF sy DOCX (misy rehefa mampiasa Word avy amin'ny takelaka)
LibreOffice 4.0 dia mbola eo am-pivoarana, azoko fa efa ao amin'ny repositories Ubuntu 13.04 izy io, ka toa ho vonona amin'ny volana aprily ho avy. Andao hiandry ny kinova vaovao, izay mampanantena zavatra betsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LibreOffice 4.0 dia hanatsara ny endrika ivelany sy ny asany
Fiovana tena tsara.
Aleoko ny fanovana ny fampiasa noho ny fisehoana.
Raha vantany vao misy io dia ataoko «pacman -S libreoffice» kely myself
Ny tena marina dia mila tabilao toa an'i Microsoft Office aho, hitako manokana fa tena miasa izy io, azo ampiharina ary intuitive, saingy angamba tsy izany no izy satria azo antoka fa nisy patanty ny endriny.
Kofehy? Eny, tsara izany famolavolana izany.
Izany hoe, Ribbon, ny antony rehetra manerantany. Tena tiako be io famolavolana io ary marina ilay mpiara-miasa etsy ambany, AutoDesk, Winzip sy ny hafa izay tsy tadidiko no mampiasa azy, ka tsy mino aho hoe nahazo patanty io.
Tsy fantatro raha misy patanty io, saingy ampiasain'ny autodesk ihany koa, fa raha ny tenako manokana dia mila fanovana sary masina kokoa aho.
Amin'ny andro nametrahan'izy ireo izany kofehy maharikoriko izany tao amin'ny birao malalaka, hanomboka hitady suite hafa aho ...
Izaho manokana dia tiako ilay interface izay tantanan'ny LibreOffice amin'izao fotoana izao, dia Retro, tsara tarehy ary nostalgic ary vao mainka ankehitriny afaka mametraka lohahevitra (olona) toa izay ataontsika ao amin'ny Firefox isika, saingy inona no hanomezana fanavahana kely kokoa azy io, zavatra iray hanome azy io Ny fanahin'ny fahalalahana malalaka an'ny lozisialy dia ny ahafahantsika manova ny lohahevitra kisary.
Fitaovana -> Safidy -> Personalization -> Sary masina
Amin'ny fampiasana osx, azonao atao tsara ny mampiasa iwork.
Tsy tiako ny ribbom, aleoko ny menio azo namboarina
Tena mampiady hevitra ny olan'ny interface, maro ny olona mangataka ny fanovana ary misy ny hafa izay tia ny fomba fanaony.
Raha izaho manokana dia tsy mankasitraka an'i Ribon aho, voalohany fa tsy tiako ny "maka tahaka" an'i Microsoft ary ny faharoa kosa miaraka amin'ny MS-Office sy ny Ribon dia mbola tsy hitako ny tenako ary miafara amin'ny fitantanana Libre-Office aho.
Aleo avela toy izao izy ary manisy fiasa vaovao, ao anatin'izany ny fanaingoana ireo sary masina sy menus.
Mangetaheta aho mahita azy ... fa tiako ny fampifangaroana kokoa ireo rakitra .docx (tsy miraharaha ireo voavonjy aho) satria zavatra maro no diso lalana na miova toerana amin'ireo endrika ireo
Manaiky tanteraka. Tokony ho toy izany koa eo amin'ireo suite "maimaimpoana" (oh: eo anelanelan'ny Calligra sy LibreOffice). Ilay antontan-taratasy ODT mitovy dia toa samy hafa tanteraka amin'ny mpanoratra sy teny.
Momba ny DOCX dia ilaina ihany koa. Ny tetezamita tsy misy fangarony eo anelanelan'ny "izy telo" (Miresaka momba ny Birao Micro & Soft, LibreOffice ary Calligra Suite) no tsara kokoa.
Ny fampifanarahana ireo endrika fisie dia tena ilaina tokoa, ary zavatra mety hampirisika ny maro hanandrana zavatra hafa sy tsy andoavam-bola.
Mila fanovana sary masina fotsiny izy ireo, tsy dia mahasarika ny saiko ireo sary masina ireo fa mitazona ny endrika mahazatra tsy misy kofehy.
Heveriko fa ny zava-dehibe indrindra amiko dia ny manatsara ny fampifanarahana amin'ireo rakitra MS, indrindra amin'ny tontolo iasako. Na izany aza, tsy laviko fa ilaina ny manandratra tarehy. Hanombohana azy, ny fahaizana manova ireo sary masina (araka ny nolazain'ny sasany) dia tsara.
Tiako be dia be izany, aleoko ihany koa ny fanovana tsara ny sary masina Ribon na tsia Ribon isaky ny mila an'ity suite ity aho dia tsy mahomby mihitsy ary ny asa dia nivoaka 10 foana
Tsy nisy na inona na inona nitranga tamin'ny farany tamin'ny Citrus na dia hitovy amin'ny google docs aza izany.
Vakio ity vaovao ity.
Ny Apache OpenOffice 4.0 dia mitaky be dia be, miloka be miaraka amin'ny fampidirana boaty ho an'ny lafiny vaovao izay hahamora kokoa, manintona kokoa, mailaka ary haingana kokoa rehefa mamaritra ny toetran'ny singa ao amin'ny antontan-taratasinay (toetra, fehintsoratra, pejy, sary, latabatra, sns.), ary izay manolo ireo biraom-pitaovana ankehitriny.
Raha izany no izy, amin'ny farany ireo mpisitraka dia isika mpampiasa. LibreOffice sy OpenOffice mizara toetra mampiavaka azy ireo, koa raha ampiharin'izy ireo ao amin'ny Apache OpenOffice 4.0 izany dia hoentin'izy ireo tsy ho ela.
Ny fahasamihafana tokana ananan'ny LibreOffice sy OpenOffice. Ireo fahazoan-dàlana.
Ny fahazoan-dàlana Apache sy BSD dia mamela ny fampiasana kaody. Ny mpampiasa izay mampiasa na manova ny kaody amin'ny programa manana fahazoan-dàlana Apache na BSD sasany. Azonao atao ny manova azy ho kaody nalaina tao amin'ny loharano nikatona. Mila manome tatitra momba ny fanovana nataonao fotsiny ianao fa tsy voatery hanome ny kaody izay nampidirinao na novainao.
Tadidio fa ny APPLE dia naka ny kaody BSD hamoronana iOS sy Mac OS.
Eny, tsy manam-pahaizana momba izany aho, saingy heveriko fa amin'ny ambaratonga kaody dia tokony hisy ny tsy fitoviana, avy eo inona no ho hevitr'izany raha hitondrana ireo tetikasa roa ireo ... Tsy milaza aho hoe ny iray maka amin'ny iray hafa ary ny mifamadika amin'izany, fa avy any izy ireo dia mitovy satria Heveriko fa tsy .. Na izany na tsy nolazaiko io dia tsy manam-pahaizana momba ireo olana ireo aho 😀
Ho tsikaritra izao ny tsy fitoviana, satria Apache OpenOffice izay hita fa hanararaotra ny kaody nomen'i IBM avy amin'ny lotus.
Etsy ankilany, ny interface graphic an'ny OpenOffice sy LibreOffice dia voasoratra miaraka amin'ny tranomboky VCL, tranomboky voasoratra ao amin'ny C ++ izay tsy mifanaraka amin'ny Gtk 3.6 sy Qt 4.9 …… ..Izany no antony tsy ananan'ny widgets LibreOffice ny hatsaran'ny KDE. 4.9 (Qt 4.9) na GNOME 3.6 (Gtk 3.6).
Niresaka tamin'i Michael Meeks avy amin'ny LibreOffice (libreoffice@lists.freedesktop.org) ………. Nanontaniako izy raha manana API ho an'ny tranomboky VCL izay ampiasain'ny LibreOffice ……. Tsy namaly ahy izy ireo…. Izy ireo dia zara raha manana fampahalalana ho an'ny programmer vaovao… nomeny ahy ity …… ..
https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. ity rohy ity dia mampiseho ny fomba fanaovana sy ny fiasan'ny tranomboky VCL…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Miombon-kevitra aminao aho. Elav OpenOffice sy LibreOffice no hevi-dehibe hidiran'ny GNU / LINUX amin'ny monopole MICROSOFT.
Raha manana efitrano fiasana amin'ny birao isika, miasa, maharitra, mahasarika ireo mpampiasa (estetika).
Mino aho fa hisokatra ny fotoana ahafahan'ny GNU / LINUX sy ny fiarahamonina hitombo.
Mahazo mizara mpampiasa bebe kokoa amin'ny tsenan'ny rafitra miasa. Izay no nofinofiko farafaharatsiny
Tsy fantatro raha ho hevitra adaladala izany nefa tsy hahasoa ny rehetra ve ny manova ny tranomboky VCL ary manoratra ny interface amin'ny alàlan'ny Qt?
Raha Elav ny fisainanao dia mitombina ary hamaha ny zava-drehetra izany.
Mila manoratra indray ny tranomboky VCL rehetra ianao mba hifanaraka amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9, asa goavana io ……………, ohatra, PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA, sns. Ohatra, ataovy mifanaraka amin'ny tranombokiny Gtk 3.6 na Qt 4.9 dia asa tsara nefa manao izany izy ireo.
Asa goavana tokoa ny mampifanaraka ny VCL amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9… .Fa heveriko fa mendrika izany.
Ohatra, ao amin'ny pejy Gtk dia lazainy aminao izay fiteny fandaharana manohana an'i Gtk.
Raha atao teny hafa, ny fiteny na ny tranomboky dia mifanaraka amin'ny Gtk (GNOME) ary mifanaraka amin'izany.
Izany no antony mahatonga ny programa GNU / LINUX sasany hanana endrika sary mahatsiravina.
Picasa na widget Google dia toa mahatsiravina ao amin'ny GNU / LINUX noho izay antony izay.
LibreOffice 4.0 dia tsy ao amin'ny repositories Ubuntu (satria tsy ao amin'ny Debian koa izy io; Rene / Björn eo ambonin'izy ireo izy ireo). Iza no nilaza taminao raha tsy izany? Arahaba.